မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄
မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ ညီသော ဖောင့်များသုံးစွဲစေရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ကြရန်
"ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာသုံးစံနှုန်းများကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဘာသာစကားများကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ပါ"
၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့တွင် Myanmar Mobile Users Group ရှိ ပို့စ်တစ်ခုမှ စတင်ကာ မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်တော်တော်များများဖြင့် တက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော မြန်မာစာစနစ်ကို သုံးစွဲစေရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့၏ လက်ရှိဆောင်ပုဒ်မှာ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာသုံးစံနှုန်းများကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဘာသာစကားများကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ပါ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာမှ အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်များတွင် တနင်္ဂနွေတိုင်း ယူနီကုဒ် အသုံးပြုကြရန် စတင်၍ စည်းရုံးလှုံဆော်ခဲ့သည်။ ထို့စည်းရုံးရေးကိုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း မန္တလေး FM နှင့်ချိတ်ဆက်၍ အဖွဲ့၏ ပထမဆုံးသော ပညာပေး အစီအစဉ်ကို လေလှိုင်းပေါ်မှ တိုက်ရိုက်လွှင့်၍ အသိပညာပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် PEN Office တွင် မီဒီယာများကို ဖိတ်ကြား၍ တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း အသုံးပြုပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့သည့်အပြင် မီဒီယာများကိုလည်း ယူနီကုဒ်စနစ် သုံးစွဲကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကေအမ်ဒီ(KMD)မြေနီကုန်း ကွန်ပျူတာ သင်တန်းကျောင်းတွင်လည်း လူငယ်များအတွင်း အသိပညာ ပြန့်ပွားစေရန် ကူညီဟောပြောခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၁၈.၁.၂၀၁၅ တွင် မန္တလေးမြို့ ယုံကြည်ရာစာဖတ်အသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ယူနီကုဒ်အသုံးပြုသင့်ကြောင်း ဟောပြောခဲ့ကြသည်။ ဘားကမ့်ရန်ကုန်၂၀၁၅ တွင်လည်း "Unicode နှင့် အဆင်မပြေမှုများ အကြောင်း ဆွေးနွေးရအောင်" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထပ်မံ၍ ယူနီကုဒ် စနစ်မည်သို့ အားသာသည်ကို ဟောပြော အသိပညာဖြန့်ဝေခဲ့ပြီး ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလိုသူများကို MICT Park မြက်ခင်းပြင်တွင် ကူညီထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။
မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ၏ ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဖြစ် အန်းဒရွိုက်စနစ်သုံး ဖုန်းများတွင် မြန်မာစာ စနစ်တကျ ရေးနိုင်ရန် ဗေ ကီးဘုတ် ကို အခမဲ့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ဗေကီးဘုတ်တွင် ရှမ်း၊ မွန်၊ ပအိုဝ်ႏ၊ ပလောင်၊ ဗမာ စသော မြန်မာတိုင်းရင်းသား ဘာသာများ ပါဝင်ပြီး မပါဝင်သေးသောတိုင်းရင်းသားဘာသာများကိုလည်း ထပ်မံဖြည့်သွင်းပေးရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ ယူနီကုဒ်သုံးစွဲသူများ အဆင်ပြေစေရန် MUA News Apk ကိုလည်း အခမဲ့ ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ယူနီကုဒ်မပါဝင်သေးသောဖုန်းများတွင် ယူနီကုဒ်အလွယ်တစ်ကူထည့်သွင်းနိုင်ရန် MUA Font Changer ကိုလည်း ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် မော်ဒယ်နိမ့်ဖုန်းများတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
ယူနီကုဒ်အသုံးပြုသူများအတွက် ဆော့ဝဲများကိုလည်း developer အပေါင်းမှ ကူညီရေးသားပေးခဲ့ကြသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်ရှိ မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
MUA News Apk Archived3July 2015 at the Wayback Machine.
MUA Font Changer Archived9June 2015 at the Wayback Machine.
Font နှင့် Windows သို့မဟုတ် Browser တွင် အသုံးပြုနည်းများ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ&oldid=743768" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။